पेन्टी र ब्रा भनेअनुसार नधोएपछि पतिसँग डिभोर्स ! — Imandarmedia.com
पेन्टी र ब्रा भनेअनुसार नधोएपछि पतिसँग डिभोर्स !
श्रीमान श्रीमतीको डिभोर्स सम्बन्धी एक अनौठो घटना सार्वजनिक भएको छ । जुन थाहा पाउँदा आश्चर्य मान्नुको विकल्प हुनेछैन । एक जना व्यक्तिले श्रीमतीको जिउका भित्री वस्त्रसँग के त्यस्तो गर्दा रहेछन् ? जस कारण पत्नीले उनीसँग डिभोर्स नै गर्ने फैसला गरिन् ।
समाचार अनुसार अन्डरवेयरलाई गलत तरिकाले धोएको निहुँलाई लिएर विवाद यति बढ्यो कि मामिला डिभोर्ससम्म पुग्यो । घटना विश्वासै गर्न गाह्रोपर्ने जस्तो छ । तर महिला आफैले सोसल मिडियामा शेयर गरिसकेपछि विश्वास गर्नैपर्यो । ती महिलाका अनुसार उनका लोग्नेले अल्छी नमानीकन दुबैजनाका कपडा धुने गर्दा रहेछन् ।
कतिपयले उनले ठिकै गरेको भनेका छन् भने कतिपयले चर्को आलोचना गरेका छन् । ती महिलाले आफ्नो नामचाहीँ खुलाएकी छैनिन् । एजेन्सी
२०७४ माघ १७ गते प्रकाशित